My iPhone agaghị emelite! Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
gbanwee ozi ịntanetị m apple
mkpọchi mkpọchi rapaara na iphone 4
kedu ka m ga -esi ehichapụ foto site na iphone m
My iPhone agaghị emelite! Nke a bụ The Real Idozi.
Apple ka weputara ngwanrọ sọftụwia iPhone ọhụrụ ma ọ dị gị ọkụ ịnwale atụmatụ ọhụrụ ọ bụla ọ gụnyere. Go na-aga imelite iPhone gị na ụdị kachasị nke iOS na BAM! Gị iPhone agaghị emelite . N'agbanyeghị ugboro ole ị nwara, ozi njehie na-apụta ma ọ bụ usoro ahụ na-adị mfe, ọ na-ewekwa iwe. Emela iwe: N’isiokwu a, aga m egosi gị esi edozi iPhone nke na-agaghị emelite .
My iPhone agaghị emelite: Laghachi na Ntọala
Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, ma oftentimes rebooting gị iPhone nwere ike idozi update mbipụta. Iji mee nke a, jigide bọtịnụ ike iPhone gị ruo mgbe ihe mmịfe 'Slide to Power Off' pụtara. Ọ bụrụ na iPhone gị enweghị bọtịnụ Home, n'otu oge pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ na bọtịnụ olu.
kedu ihe ọ pụtara mgbe ị na -arọ nrọ maka oke ifufe
Jiri mkpịsị aka gị jiri ihe mmịfe ahụ pụọ na aka ekpe gaa aka nri, chere sekọnd ole na ole ka iPhone gbanye gị, wee tụgharịa ya ozugbo site na ijide bọtịnụ ike.
Gbaa mbọ hụ na inwere oghere zuru oke
Ọzọ, lelee ma ọ bụrụ na iPhone gị nwere ohere zuru ezu iji chekwaa mmelite ahụ. Imelite iOS n'ozuzu chọrọ megabytes 750-800 nke oghere efu tupu ha arụnye. (Enwere megabytes 1000 na 1 gigabyte, yabụ nke ahụ abụghị ọtụtụ ohere.)
Iji chọpụta ókè ohere dị, mee ihe ndị a:
Kpatụ ya izugbe .
Pịgharịa gaa na ala Nchekwa iPhone .
N'elu ihuenyo ahụ, ị ​​ga-ahụ ole nchekwa dị na iPhone gị. Ọ bụrụ na ị nwere karịa 1 GB (gigabyte) dị, mgbe ahụ ị nwere ohere nchekwa zuru oke iji melite iPhone gị.
Ọ bụrụ na iTunes anaghị arụ ọrụ, Gbalịa Ntọala Ntọala (na Vice-Versa)
Enwere ụzọ abụọ iji melite ngwaọrụ iOS: iji iTunes ma ọ bụ n'ime ngwa Ntọala. Ọ bụrụ na ịchọta na ị na-enweta njehie mgbe ị na-eji iTunes iji melite iPhone gị, nye ngwa Ntọala ahụ. Ọ bụrụ na ngwa Ntọala anaghị arụ ọrụ, gbalịa iji iTunes. Aga m egosi gị otu esi eme ha abụọ. Ana m akwado ịkwado iPhone gị na iTunes ma ọ bụ iCloud tupu ịmalite usoro melite.
Imelite gị iPhone Na iTunes
Meghee iTunes na kọmputa gị na ikwunye na gị iPhone iji eriri Lightning gị (eriri ị na-eji akwụ ụgwọ iPhone gị).
Pịa iPhone buttonat n'elu nke mpio iTunes.
Pịa Mmelite bọtịnụ n'aka nri nke ihuenyo.
Kwenye na ịchọrọ imelite iPhone gị site na ịpị aka Budata na Mmelite.
Imelite gị iPhone Na Finder
Ọ bụrụ na Mac gị na-agba ọsọ macOS Catalina 10.15 ma ọ bụ karịa, ị ga-eji Finder karịa iTunes mgbe ị na-emelite iPhone gị.
Jikọọ iPhone na Mac gị site na iji eriri Lightning.
Pịa na iPhone gị n'okpuru Ọnọdụ .
Pịa Lelee maka Mmelite .
Imelite gị iPhone Na Ntọala
Ẹkedori Settings ngwa gị iPhone na enweta izugbe .
Kpatụ Mmelite ngwanrọ.
Ikwunye na gị iPhone na enweta na Ibudata na Wụnye bọtịnụ.
Ebubela Apple Servers?
Mgbe Apple weputara mmelite ohuru iOS, ọtụtụ nde mmadụ na-ejikọ iPhones ha na sava Apple iji budata ma wụnye ya. Na ndị niile ahụ na-ejikọta n'otu oge, ihe nkesa Apple nwere ike na-agbasi mbọ ike ijide, nke nwere ike ịbụ ihe mere iPhone gị agaghị emelite.
Anyị hụrụ nsogbu a na Apple kachasị dị ọhụrụ mmelite: iOS 13. Ọtụtụ puku mmadụ nwere nsogbu mgbe ịwụnye mmelite ahụ wee rịọ anyị maka enyemaka!
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-anwa ịrụ isi melite na iPhone gị, buru n'uche na ọtụtụ ndị ọzọ dịkwa oke, yabụ mgbe ụfọdụ, ị ga-enwe obere ndidi! Nleta Ebe nrụọrụ weebụ Apple iji hụ ma ọ bụrụ na sava ha na-arụ ọrụ nke ọma.
My iPhone N'agbanyeghị Agaghị Melite!
Ọ bụrụ na iPhone gị ka agaghị emelite, ọ bụ oge iji weghachi iPhone gị na iTunes. Dị njikere na ekwentị gị kwadoo tupu iweghachi, n'ihi na ị ga-ehichapụ ọdịnaya na ntọala niile site na iPhone gị.
Iweghachi gị iPhone
Meghee iTunes na kọmputa gị na ikwunye na gị iPhone iji eriri Lightning gị.
Pịa Weghachi bọtịnụ n'akụkụ aka nri nke windo ahụ.
Kwenye ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị na mmapụta window. iTunes ga - ebudata iOS kachasị ọhụrụ, hichapụ ihe niile na iPhone gị, ma wụnye ụdị emelitere nke iOS.
Enyemaka! Mweghachi eweghachighị Ọrụ!
Ọ bụrụ na ị ka na-ahụ njehie na iTunes, soro nkuzi anyi banyere otu esi eme DFU weghachi gị iPhone . Nke a dị iche na ichekwa ọdịnala n'ihi na ọ na-ehichapụ ngwanrọ niile na Ntọala ngwaike site na ekwentị gị. Ọ na-mgbe hụrụ ka ndị ikpeazụ nzọụkwụ na idozi software na rapaara iPhone. Ọ bụrụ na ndị DFU weghachi anaghị arụ ọrụ, enwere ike enwere nsogbu ngwaike na iPhone gị.
kedu ihe na -agagharị na iphone
Gị iPhone: Emelitere
Ma e nwere na ị nwere ya: gị iPhone na-akpatre emelite ọzọ! Echere m na isiokwu a nyeere gị aka. Mee ka anyị mata ihe ngwọta nyere gị aka na ngalaba nke dị n'okpuru.